Imisa lacag ayay ku qasbanaan doontaa in Man United ay siiso Jose Mourinho hadii ay shaqada ka ceyriso? – Gool FM
Imisa lacag ayay ku qasbanaan doontaa in Man United ay siiso Jose Mourinho hadii ay shaqada ka ceyriso?
(Manchester) 07 Agoosto 2018. Wargeyska “Mellonline Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday qiimaha ay Manchester United ku qasbanaan doonto inay siiso Jose Mourinho marka ay dhacdo in ay ka ceyriso shaqada Red Devils xilli ciyaareedka soo socda.
Jose Mourinho ayaa gali doono xili ciyaareedkiisii saddexaad, waxay dhamaan mucaashiqiinta Manchester United ka walwalsan yihiin waxa dhici doona xilli ciyaareedka seddexaad, kadib maarkii uu caadeestay Mourinho inay dhacaan waxyaabo musiibo ah, kahor inta uusan bixin, marka dib loo fiiriyo dhamaan kooxaha uu soo leeliyay.
Sidaasi darteed wargeyska ayaa diirada saaraya sida uu ku heli lahaa inta ay gaarsiisan tahay qiimaha ay Red Devils ku bixin doonto hadii ay Jose Mourinho ka ceyriso shaqada, waana qiimo dhan mushaarka sanad kaamil ah ee gaarsiisan 12 milyan oo ginni, taasoo aan ku adkaan doonin Manchester United haddii ay dhacdo xaalado adag.
Inkastoo uu sanad kaamil ah kaga harsan yahay heshiiska Jose Mourinho, hadana heshiiska ayaa ogolaanaya in Jose uu xaq u yeelan doono inuu helo mushaarka sanad kaamil ah, sidaasi darteed lacagta waxay noqon doontaa 12 milyan ginni.
Macalinka reer Portugal ayaa ka mid ah tababarayaasha ugu cad cad ee u sharaxan in shaqada laga ceyrin doono xili ciyaareedka bilaaban doona maalinta khamiista ee soo aadan.
“Horyaalka Talyaaniga wuxuu u baahan yahay Cristiano, sidoo kale heshiis Modric waa suuragal inuu dhaco”...Ronaldo